सांसदलाई मर्न ५० लाखको सुपारी पाको छु भन्दै धम्किदिने व्यक्ति पक्राउ ,, – Ranga Darpan
सांसदलाई मर्न ५० लाखको सुपारी पाको छु भन्दै धम्किदिने व्यक्ति पक्राउ ,,
चैत,२६ काठमाडौं – सांसदलाई मार्न ५० लाखको सुपारी दिएको खुलासा खुलेको छ झापा क्षेत्र नं. ३ का सांसद राजेन्द्र लिङ्देनलाई केही दिनदेखि धम्कि आएको थियो । उनलाई पालै पालो कहिले ह्वाट्सप र कलमा धम्कि आउने गरेको उनि बताउछन ।
बल्कि उनलाई अर्को नम्बरबाट तपाईलाई मार्ने सुपारी मलाई दिएका छन् सचेत हुनुहुला भन्ने पनि कल आयो उनि तनाबमा हुदै गरे र आफुले ट्वीटपनि गरे ‘कसैले ५० लाखको लोभमा ममाथि गोली चलाउन सक्ला ? यति लेखेर उनले कतै उजुरी पनि दिएनन ।
उनका अनुसार काठमाडौंमै भएका वेला त्यो फोन आएपछि उच्च प्रहरी अधिकारीसँग छलफल पनि गरेका थिय तर लिखित उजुरी भने दिएनन । यो लगतै प्रहरीले सुक्ष्म अनुसन्धान गर्यो र झापाबाट एक जना व्यक्ति पनि पक्राउ परे ।
तर, उनले किन लिङ्देनलाई त्यसरी फोन गरे भन्ने खुलेको छैन । प्रहरीका अनुसार एक व्यक्तिले दुई स्वरमा फोन गरेर धम्कि दिएको खुलेको छ । अन्य ब्याक्ति हो वा होइन त्यो अन्य ब्याक्ति पक्राउ परेपछि मात्र लिङ्देनलाई दिइएको धम्कीबारे थप खुल्ने प्रहरी जानकारी गरेको छ ।
एनसेलबाट तीन महिनाभित्र कर उठाउन सर्वोच्चको आदेश ,,
बारामा आएको आँधी हुरी चितवनबाट शुरु भयको थियो जुन टोर्नाडो हो ,,